Top Videos from Dhamma Video - Page 3
101 18:36	Popular
by Admin3years ago 843 Views / 1 Likes
102 03:18	Popular
ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ ရှင်းတမ်း _ ဝင်းဦး၊
103 1:06:29	Popular
Powerful Buddhist Monk Pali Chanting - Cure Diseases & Keep evils away
by Admin4years ago 839 Views / 1 Likes
This chanting will invite angels to your house.To cure disease , please play the video and put drinking water cup or bottle in front. It has to be place at Good and clean place like table.You may drink the water or directly apply where applicable.You may
104 45:25	Popular
Buddha Abhidhamma part-2 Day-1 by Dr. Mehm Tin Mon 15-2-2012 Singapore
by Kappiya5years ago 812 Views /0Likes
Buddha Abhidhamma part-2 Day-1 by Dr. Mehm Tin Mon 15-2-2012 Singapore.
105 04:07	Popular
by Admin5years ago 804 Views /0Likes
106 02:12	Popular
107 1:04:51	Popular
The Life Of Buddha မဟာဗုဒ္ဓဝင်
by Admin5years ago 800 Views / 1 Likes
108 2:01:51	Popular
ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ် ဗုဒ္ဓ၀င် ၁ ( INDIA ကား )
by Admin5years ago 798 Views /0Likes
109 1:36:17	Popular
12.07.2015 MALAYSIA ,IPOH -AFTERNOON 2:30pm DHAMMA TALK BY U NANDAKA(DHAMMA LULIN)
110 10:04	Popular
BANGLADESH BUDDHIST SONG KERTON Part 5
111 8:00:00	Popular
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပွဲ
by Admin4years ago 785 Views / 1 Likes
ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့... ကျွန်တော်/မတို့ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီးမှ လေးရက် သုံးညတိုင်တိုင် လူပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင် စုပေါင်းရွတ်ဆို ပူဇော်ကြသည့် အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း ပူဇော်ပွဲကို နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်ဆိုလျှင် စတုတ္ထအကြိမ်သို့ပင် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်
112 28:19	Popular
by Admin5years ago 784 Views /0Likes
113 05:33	Popular
by Admin5years ago 778 Views / 1 Likes
114 55:58	Popular
ပဌာန်းတရားတော် ( စာတန်းထိုးရွတ်ဖတ်ပွားနည်း )
by Admin5years ago 773 Views /0Likes
115 05:32	Popular
by Admin5years ago 772 Views /0Likes
မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက် ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလကွယ် ၁၄ ရက်၊ သောကြာ၊ အရှင်စန္ဒသီရိ (အောင်စကြာဆရာတော်) ၃- မေတ္တသုတ်၊
116 1:28:34	Popular
ဗောဇ္ဈင်သုတ် တရားတော် - မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
by Admin5years ago 771 Views /0Likes
ဗောဇ္ဈင်သုတ် တရားတော် အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: (MyanmarNet.Net Dhamma Videos)
117 09:57	Popular
Tay Bon Mar- Yee Yee Thant With Pattalar- Myanmar Buddhist Song- Dhamma Song
by Admin5years ago 770 Views /0Likes
118 1:01:02	Popular
Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day3Part2(14 Jan 2015)
by Kappiya5years ago 769 Views /0Likes
119 1:41:37	Popular
Oxford buddha vihara singapore 2015 july 26, 7th Vassa Robe Offering Ceremony
120 06:20	Popular
ဆရာကြီးဦးဘခင် - ပဋိစသမုပ္ပါဒ် ပဌာန်း
Dependent origination is set forth inaseries of relations: 1. Dependent on ignorance there are activities (avijjaapaccayaa sa"mkhaaraa); 2. Dependent on activities there is consciousness (sa"mkhaarapaccayaa viññaa.na"m); 3. Dependent on consciousness th
121 2:28:25	Popular
122 14:16	Popular
ရန်ငြိုး ရန်စပြေ လူချစ်လူခင်ပေါစေ သော မေတ`ာသုတ် မင်္ဂလာရှိသော နေ့ ည အချိန်အခါသမယဖြစ်စေခြင်း ..မကောင်းသော ဂြိုလ်စီး ဂြိုလ်နင်း များမှကင်းလွတ်စေသော ပုဗဏှသုတ် ၊အိမ်မက်ဆိုးမြင်မက်လျှင်ရွတ်ဖတ်ရန် ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာ =ဘေးရန်အန္တရာယ် အနှောက်အယှ့်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
123 58:18	Popular
မဟာစည်နယ်လှည့်  ဓမ္မ္မကထိကမေတ္တာအေးဆရာတော်-အရှင် သုဇာတ Myitta Aye Sayadaw Ashin Thu Zar Ta-Eleven Maha Paritta Suttas
124 1:44:28	Popular
Thitagu Sayadaw - Dhamma Talk
by Admin5years ago 756 Views /0Likes
125 58:47	Popular
126 50:17	Popular
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး - ပရိတ်ကြီး၊(၁၁)သုတ်
by Admin5years ago 751 Views /0Likes
127 45:43	Popular
by Admin5years ago 749 Views /0Likes
128 09:02	Popular
by Admin5years ago 748 Views /0Likes
စိုးစန္ဒာထွန်း + သိန်းလှမော်
129 1:00:56	Popular
Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day4Part2(15 Jan 2015)
by Kappiya5years ago 748 Views /0Likes
130 56:07	Popular
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် နှင့် ပဌာန်းတရားတော်
by Admin5years ago 747 Views /0Likes
မန္တလေးမြို့ - မဟာအောင်မြေမြို့နယ်-မဟာမြိုင်(၁) ရပ်ကွက်-မဟာကန်ပတ်လည်ကျောင်းတိုက် တိုက်အုပ်ဆရာတော်-ဦးနန္ဒမဉ္ဇူသာ
131 01:48	Popular
by Admin5years ago 738 Views /0Likes
132 14:43	Popular
Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day7Part4(18 Jan 2015)
by Kappiya5years ago 736 Views /0Likes
133 59:46	Popular
by Admin5years ago 730 Views /0Likes
134 09:06	Popular
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်လာ ၅၂၈ သွယ် မေတ္တာပို့ - The Chant Of Metta - Imee Ooi - Loving Kindness Chanting
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်လာ ၅၂၈ သွယ် မေတ္တာပို The chant of metta - Imee Ooi Loving Kindness Chanting
135 53:18	Popular
Pilot Sayadaw Payar Paay Tae Ah Lote Pay Tayar
by Admin5years ago 728 Views / 1 Likes
136 05:53	Popular
137 11:42	Popular
Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day 1 Part3(12 Jan 2015)
by Kappiya5years ago 726 Views /0Likes
138 1:01:03	Popular
Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day6Part3(17 Jan 2015)
139 54:10	Popular
Myauk Oo Sayadaw - Vippassana Ah Chay Khan
by Admin5years ago 721 Views /0Likes
140 1:05:01	Popular
ပဲခူးဆရာတော် အရှင် တေဇောသာရ - အရိမေတ္တေယျ မြတ်စွာဘုရား အပိုင်း-၂
141 4:00:07	Popular
မေတ္တာသုတ်တော် Daw Khin Hla Tin
by Kappiya5years ago 717 Views /0Likes
မေတ္တာသုတ်တော် ကျင့်စဉ် သင်တန်း ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် Metta sutta Dhamma Byuha Daw Khin Hla Tin
142 1:18:56	Popular
Pilot Sayadaw Khin Poon Gyi Sal Par D2
by Admin5years ago 713 Views /0Likes
143 37:08	Popular
Bamaw Sayadaw - Biography & Kanni Meditation Method
by Admin5years ago 711 Views /0Likes
144 05:52	Popular
(၁-၁၁-၂၀၁၅) ၁၃၇၇ခု၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်နေ့ ကျောက်မဲမြို့၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ခွဲ အမှတ်(၆၈) မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ခန္ဓာဝန်ချ (၅၃)နှစ်ပြည့်၊ အထိမ်းအမှတ် ဥာဏ်တော်ပူဇော်ပွဲတွင်၊ ကြွရောက်လာ ဆရာတော်များ မေတ္တသုတ် တရားချီးမြှင့်။
145 43:01	Popular
ဓမ္မစင်္ကြာ ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ မဟာသမယသုတ် မင်းကွန်းတိပိဋက ဆရာတော် (မြန်မာနက်)
by Admin5years ago 710 Views / 1 Likes
ဓမ္မစင်္ကြာ ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ မဟာသမယသုတ် ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ, မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီး The late Mingun Sayadaw Gyi: Recitations of Dhamma Cakka (Satkyar), Anattalakkhana and Maha Samaya Suttas
146 07:07	Popular
by Admin5years ago 709 Views /0Likes
147 1:02:44	Popular
148 49:56	Popular
Mya Kyauk Sayadaw & Maha Bodhi Maying Sayadaw - Second Meeting
by Admin5years ago 704 Views /0Likes
149 50:17	Popular
150 03:52	Popular
Buddhist Chant Maha Mangla Suttua 2
http://wikiread.blogspot.com/ Buddhist Chant Maha Mangla Suttua by Priya Barua With nice Voice